शनिबार, २८ भदौ
भारतमा पनि मैथिली आर्केष्ट्राको क्रेज २८ भदौ २०७६
रौतहटको ‘कटिया’ काठमाडौंमा फेमस रौतहट पुगेका जोकोहीलाई कटियाले लोभ्याउँछ । तर, अब कटियाका पारखीलाई रौतहट पुग्नु पर्दैन । काठमाडौंमै कटियाको स्वाद चाख्न पाइन्छ, कालिकास्थान चोकस्थित कटिया हाउसमा । २८ भदौ २०७६
जाभी र इनिएस्टा : फुटबलकाे ‘फेनोमेनल’ जोडी सबै कथाको अन्त्य सुन्दर हुँदैन । तर, अन्त्य सुन्दर नहुँदैमा कथा नै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । जाभी र इनिएस्टा फुटबलका कथा त्यस्तै हुन् । गाथा उस्तै । २८ भदौ २०७६
वा ! हाइकिङ धूलो–धूवाँले उकुसमुकुस । घरहरूको घना र अव्यवस्थित जंगल । उस्तै ब्यस्त दैनिकी । यही हो, काठमाडौंको खास विशेषता । तर, काठमाडौंआसपासमै यति सुन्दर र आकर्षक गन्तव्य छन्, जहाँ एकपटक पुगेपछि फेरिफेरि पनि गइरहुँजस्तो लाग्छ । २८ भदौ २०७६
सरोदवादक सुदर्शनः भारतमा चर्चित, नेपालमा गुमनाम २८ भदौ २०७६
४२ सन्तानकी कुमारी आमा ! उनी अविवाहिता हुन् । तर, ४२ सन्तानलाई न्यानो मातृत्व प्रदान गरिरहेकी छिन् । आफूभन्दा ‘ठूला उमेरका छोरीहरू’को स्याहार गरिरहेकी छिन् । समाजबाट तिरस्कृत भएर कठिन जीवन भोग्न विवश थुप्रै छोरीलाई स्नेहपूर्ण मातृत्व प्रदान गरिरहेकी ‘कुमारी आमा’ हुन्, श्रीनेहा । २८ भदौ २०७६
सात दशकअघिको काठमाडौं घरका बूढीपाकीहरू ती युवतीहरूलाई पछाडि आङदेखि नितम्बसम्म मिचीमिची तेल लगाइदिरहेका हुन्थे भने कुनै युवती अगाडि छाती नै देखिने गरी नवजात शिशुलाई दूध ख्वाइरहेका हुन्थे । कोही नर्कटको तीनोटा लट्ठी ठड्याएर थाङ्नो हालेर मैलो लम्पटमा शिशुलाई सुताएको देखिन्थ्यो । २८ भदौ २०७६
‘कुनै किताबले बिरामी बनायो, कुनैले क्रान्तिकारी’ इन्द्रबहादुर राईको ‘जयमाया एक्लै लिखापानी आइपुगी’ पढेपछि केही दिन बिरामी भएँ । यस्तो त्रासद, महात्रासद वर्णन नेपाली साहित्यमा अभूतपूर्व कृति हो । यस्तै, मलाई पर्ल एस बकको’ गुड अर्थ’ले पनि गहिरो गरी हल्लायो । २८ भदौ २०७६
‘समाज र पद्धतिसँग निहुँ खोजिरहन मन पर्छ’ प्रश्न मेरा लागि सबैभन्दा कामलाग्दा साथी बन्छन् । प्रश्नले तरङ्गित दिमाग उत्तर नभेटी शान्त हुनै चाहन्न । प्रश्न मेरा लागि रोग र डाक्टर दुवै हो । त्यसैले म प्रश्नलाई असीम प्रेम गर्छु । २८ भदौ २०७६
गजल: आम्दानी सोधिरहन्छन् २८ भदौ २०७६
‘सिद्दान्तको घनचक्कर’बाट बाहिरिँदै सञ्जीव उप्रेती अर्नेस्ट हेमिङ वेको ‘ओल्ड म्यान इन द सी’ किताब सानोमा पढ्दा सरर कथा बुझें । अहिले फेरि अर्कै तरिकाले बुझें । ३५ वर्षको उमेरमा अर्कै तरिकाले बुझें । पठनलाई मेरो जीवनका अनुभवले प्रभाव पार्छ । म कस्ताकस्ता अनुभव र भोगाइबाट गुज्रिएँ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ । २८ भदौ २०७६